Product Description အတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့အချက်များ -
Online မှာ ဈေးရောင်းတဲ့အခါ Customer တွေဟာသင့်ရဲ့ Product ကို မျက်မြင်တွေ့ထိပြီးဝယ်ယူရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် Customer တွေရဲ့ အမြင်အာရုံမှာ သင့်ရဲ့ Product အပေါ်စိတ်ချယုံကြည်ပြီးဝယ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်။Customer တွေဟာ သင့်ရဲ့ Product ကိုမျက်မြင်ဝယ်နေသကဲ့သို့ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အမိုက်စား Product Description တွေရေးသားဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
Product Description ရေးသားဖို့အတွက် အခြေခံ လိုအပ်တဲ့ Concept သုံးချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
သင့် Product ကဘာလဲ ? သင့် Product ရဲ့ အခြားပြိုင်ဘက် Product တွေနဲ့မတူညီတဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲ ? ဥပမာ သင်ဟာ Sustainable ဖြစ်တဲ့ T Shirt ကိုရောင်းချနေတယ်ဆိုရင် သင့် Product ရဲ့အဓိကကွဲပြားခြားနားမှုဟာ Sustainable ဖြစ်ခြင်းပါ။ဒီအချက်ကို သိသာထင်ရှားစွာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးသားဖော်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Product ကိုဘယ်လိုအသုံးပြု/အသုံးချ လို့ရလဲဆိုတာပါ။Customer တွေသင့်ရဲ့ Product ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ထူးခြားတဲ့ ပျော်စရာကောင်းပြီး အများနဲ့မတူတဲ့ အသုံးပြုပုံနည်းတွေရှိ လျှင်ဖော်ပြပေးပါ။
သင့်ရဲ့ Product ကိုဘာကြောင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲသင့်တာလဲ ? သင့်ရဲ့ Product က Customer တွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝမှာ ဘယ်လိုအသုံးဝင်တာလဲ ? ဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲ ? စသဖြင့်အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးပါ။ဒါဟာ Customer တွေရဲ့ စိတ်အာရုံခံစားချက်တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့အရေးပါပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ – Sustainable T-Shirt ကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာ ဒီ T-Shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာမြေကို တစ်ဒေါင့်တစ်နေရာကနေ Saving လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ပုံဖော်ရေးသားတဲ့အခါ မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ Product တစ်ခုအဖြစ် Customer တွေရဲ့ဝယ်လိုအားကိုမြှင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြသွားတဲ့အခြေခံအချက်ဟာ သင့်ရဲ့ Product ကို Online မှာရောင်းချတဲ့အခါ အမိုက်စား Description တွေနဲ့ဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက် သိသင့်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Min Thuta/ ဧပြီ 8, 2020/ Blog/0Comment